Avengers : Endgame က Infinity War ရဲ့ လှပတဲ့ အဆုံးသတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရဲ့လား? – For her myanmar
Avengers : Endgame က Infinity War ရဲ့ လှပတဲ့ အဆုံးသတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရဲ့လား?
Posted on April 27, 2019 April 29, 2019 Author Wathun	Comments Off on Avengers : Endgame က Infinity War ရဲ့ လှပတဲ့ အဆုံးသတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရဲ့လား?
ဖြစ်သွားလား၊ မဖြစ်သွားလားတော့မသိဘူး. ငိုပြီး ပြန်ထွက်လာရတယ်.. T.T
ကဲ.. ကဲ… သတင်းကြီးနေတဲ့ Avengers : Endgame ကို ကြည့်ပြီးသွားကြပြီလား? အက်ဒ်မင်ကတော့ ကြည့်ပြီးပါပြီရှင်… အဲ့အကြောင်းလေး ယောင်းတို့ကို ပြောချင်လွန်းလို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးလိုက်ရခြင်းပါ.. ကဲ.. ဒါဆို အရင်ဆုံး Endgame မကြည့်ခင် ဘာတွေ လိုမလဲဆိုတာ အရင်ပြောပြမယ်နော်.. ကြိုတင်ပြင်ဆင် အောင်ပွဲဝင်ပေါ့ကွယ်..
ပထမဆုံး လိုအပ်တာက တစ်ရှူးထုပ်ပါ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ငိုတတ်တယ်၊ အငိုသန်တဲ့ ယောင်းတွေဆို တစ်ရှူး တစ်လိပ်လောက် ဆောင်သွားပါ 😛 နောက်တာပါ.. တစ်ထုပ်လောက်တော့ အိတ်ထဲ ထည့်သွားကြပါရှင်.. မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဒရာမာ အချိုးအကွေ့တွေကို တွေ့မြင်ခံစားရမှာပါ။
ပြသချိန် ၃နာရီ ကြာပါတယ်။ ၃ နာရီလုံးဟာ လွတ်သွားလို့ မဖြစ်တဲ့ အခန်းတွေချည်းပါပဲ.. အစပိုင်းမှာ စကားများတယ် ဆိုပေမဲ့လို့ အဲ့စကားတွေဟာ နောက်ပိုင်းလာမယ့် ဇာတ်လမ်းတွေကို ရေလည်သွားအောင် ရှင်းပြနိုင်တဲ့ စကားတွေချည်းမို့ ဒီအပိုင်းတွေလည်း ကျော်ချသွားလို့မရပါဘူး.. ဒါကြောင့် ရှူးအရင်ကြိုပေါက်ထားပါ။ ဇာတ်ကားစပြပြီဆိုတာနဲ့ ထိုင်ရာမထ၊ မျက်တောင်မခတ်တမ်းသာ ကြည့်ပါတော့ ယောင်းရေ…
အရှေ့က ထွက်ခဲ့သမျှ ၁၁ နှစ်စာ ရုပ်ရှင်တွေ အကုန်ပြန်ကြည့်ထားပါ။
ပြန်နွှေးပါ။ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူက ဘာလဲ၊ ဘယ်နားက ပေါ်လာလဲဆိုတာ နားလည်လိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟာ.. အရောင်လေးတွေ စုံလိုက်တာ၊ ချသွားတာလေးတွေ လှလိုက်တာဆိုပြီး ပြန်လာရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို နားလည်ဖို့ဆိုရင် သူ့ရှေ့က Infinity War တစ်ကားတည်း ကြည့်ထားရုံနဲ့တင် မလုံလောက်ပါဘူး။ ၂၀၀၈ Iron Man ကနေ စလို့ Infinity War အထိ တောက်လျှောက် နားလည်ထားဖို့၊ ပြန်ကြည့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ (အချိန်ရသေးရင် Iron Man ရှေ့က ထွက်ထားတဲ့ The Incredible Hulk ပါ ပြန်ကြည့်ထားပါဦး.. မင်းသားတော့ မတူဘူးရယ် 😀 ဒါပေမဲ့ Hulk အကြောင်းကလည်း သိထားဖို့ လိုတယ်လေ..) တစ်ကားမှ လွတ်လို့ မရပါဘူးနော်.. တစ်ကားလွတ်သွားတာနဲ့ နားမလည်စရာတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဇာတ်ကားတိုင်းရဲ့ Credit Scene တွေကိုပါ အကုန်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်နော်… Post Credit Scenes တွေဟာ MCU က ဇာတ်ကားတိုင်းရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပါပဲ…
Related Article >>> ယောင်းက Infinity War ထဲက ဘယ်အမျိုးသမီး ဟီးရိုးဖြစ်မလဲ?
ကဲ.. ဒါဆို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့် အပိုင်းက လုံလောက်ပါပြီ.. ဇာတ်လမ်းဘက် တစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်..
Infinity War တုန်းက Thanos ကြီးရဲ့ လက်ဖျောက်ထဲ Universe (စကြဝဠာ) က သက်ရှိ တစ်ဝက်တိတိ ဖုန်မှုန့်ဖြစ်သွားတာ သိပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ Thanos ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ တာဝန်ပြီးမြောက်သွားပြီမို့ ဂြိုဟ်တစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး တောင်ယာစိုက်ပြီး ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ (ဒါက Infinity War ရဲ့ Credit Scene မှာလည်း ပါတယ်နော်.. ) အမှန်တရားကိုယ်စီရှိကြတဲ့ Avengers တွေနဲ့Thanos ဘာတွေ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်ကြဦးမှာလဲဆိုတာ Endgame မှာ အဖြေပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။
Doctor Strange ပြောခဲ့သလို ဒါဟာ အနိုင်ရဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော လမ်း ဖြစ်လာမှာလား?
Thanos ကြီးကရော လွယ်လွယ်နဲ့ အလျှော့ပေးလိုက်မှာလား?
သေသွားတဲ့သူတွေကရော ပြန်ပြီး ရှင်သန်လာမှာလား? စတာတွေကိုတော့ ငွေရောင် ပိတ်ကားထက်မှာ ဆက်ပြီး စောင့်ကြည့်ရမှာပါ ယောင်းတို့ရေ…
Related Article >>> Infinity War ကြည့်ပြီး ဟာလာဟင်းလင်း ခံစားချက်ကြီး ကျန်ခဲ့မယ်ဆို ယုံလား ယောင်းတို့…
အက်ဒ်မင့် အမြင်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ MCU Fan တွေအတွက် ဒီဇာတ်ကားဟာ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ။
ဇာတ်ကားမထွက်ခင်က ခန့်မှန်းထားကြတဲ့ Fan Theory တွေ မှန်တာတွေလည်း ရှိသလို လွဲချော်တာတွေလည်း တစ်ပုံကြီးပါ။ Avengers တွေ ကြားက သံယောဇဉ်၊ အရာရာကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက် ဘဝဟာ အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့သွားပုံတွေ၊ အသက်ကိုရင်းပြီး အတူတူ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေကြားက ယုံကြည်မှု၊ ခေါင်းမာမှု၊ သူရဲကောင်းဆန်မှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဘဝထဲက ချစ်ခြင်းတရား၊ မိသားစု၊ ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးထားရတဲ့ အရာ စတာတွေကို ရင်နင့်စရာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို Infinity War ရဲ့ Wakanda Battle ထက် ပိုပြီး Epic ဖြစ်တဲ့ Fight Scene (တိုက်ပွဲပြကွက်)တွေကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ နောက်ပြီး ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းအား ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ပါးပါးလေး ပုတ်ပြသွားတာကို တွေ့ရဦးမှာပါ။
နောက်ပြီး Russo Brothers က Infinity War အပြီးမှာ ပြောခဲ့သလို ” သေပြီးတဲ့ သူတွေက ပြန်ရှင်လာတော့မှာ မဟုတ်ဘူး.. တကယ်ကို သေသွားတာ” ဆိုတာကလည်း ဂျင်းမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ကို သေသွားကြတာပါ။ ဆိုပေမဲ့ မမျှော်လင့်ထားဘဲ ပြန်မြင်တွေ့ရမယ့် အကွက်တွေ ရှိပါတယ်။ MCU ရဲ့ ထုံးစံ ဟာသတွေကလည်း ဇာတ်လမ်းကို လေးမနေအောင် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တာက အသက်ပါ။
MCU နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကို အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပုံက Perfect Ending လို့ ဆိုရမှာပါ။ ရယ်လည်း ရယ်ရသလို ငိုလည်း ငိုရတယ်ဆိုရင် ယုံလိုက်ပါ ယောင်းတို့ရေ… ဇာတ်ကားပြီးလို့ ရုံထဲက ထွက်လာသူတိုင်းက မျက်ခွံလေးတွေ မို့၊ မျက်နှာလေးတွေ ပျက်ပြီး ထွက်လာကြတာ မြင်မိတာပဲ အက်ဒ်မင်တော့ 😀 ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ရှူးတစ်ထုပ်လောက် ကုန်အောင် သုံးခဲ့သေးတယ် ဟီးဟီး.. Trailer မှာ ပါခဲ့တဲ့ “Whatever it takes” ဆိုတာက Endgameရဲ့ အသက်ပါ.. ယောင်းတို့အသည်းကို ကောင်းကောင်းကြီး ခွဲနိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံ.. :’(
မကျေနပ်တာကတော့ Thor ကိုပါပဲ.. မယုံမရှိပါနဲ့.. ယောင်းတို့လည်း God of Thunder (မိုးကြိုးနတ်ဘုရား) ဆိုတဲ့ Thor ကို Endgame မှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ဟာခနဲ ဖြစ်သွားစေဖို့ အာမခံပါတယ်ရှန် :/ Cap ရဲ့ “Avengers… Assemble” ဆိုတဲ့ စကားက ကြက်သီးတွေ ဖြန်းခနဲ ထသွားစေသည်ထိ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်နိုင်တဲ့ စကားလို့ပဲ ဆိုလိုက်ပါရစေ။ Avengers Theme Song ကြီး ကြားလိုက်ရရင်ကို ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာတဲ့ထိ မိုက်သောပါနော်..
ပြောချင်တာတွေ အများကြီးရှိသေးပေမဲ့ Spoil သလို ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ မပြောတော့ပါဘူးနော်.. ပြေမယ့်သာ ပြောရတာ အက်ဒ်မင်ဆို သွားမကြည့်ခင်ကတည်းက ဇာတ်လမ်းအစ၊အဆုံး Spoil ခံထားရတာ.. ဒါပေမဲ့ သွားကြည့်တော့လည်း ထိရှပြီး ပြန်လာရတာပဲ… ဟီးဟီး..
ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ MCU Fan မှန်ရင် သွားကြည့်ပါ။ တန်ကို တန်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲလို့… MCU Fan မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကြည့်လည်း ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာ အက်ဒ်မင်ပြောခဲ့သလို ထွက်ပြီးသမျှ ရုပ်ရှင်တွေ အကုန်ကြည့်ခဲ့ပါ။ End Game မှာ Credit Scene မပါပါဘူးနော်.. လုံးဝ လုံးဝ မပါတာပါ။ အချိန်ကုန်ခံပြီး မစောင့်ပါနဲ့.. ဇာတ်ကားပြီးလို့ စာတန်းထိုးတာနဲ့ ထထွက်လာလို့ ရပါပြီလို့..
ဒါဟာ Original Avengers တွေရဲ့ အဆုံးသတ်လို့တောင် ပြောလို့ရတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ MCUရဲ့ Phase3မှာ အက်ဒ်မင်တို့ ချစ်ရတဲ့ စူပါဟီးရိုးတွေနဲ့ ခွဲခွာလိုက်ရပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ MCU နဲ့ တွဲပြီး Original Avengers တွေက ဖန်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း တည်ရှိနေမှာတော့ ကျိန်းသေပါပဲ။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဆုံးသတ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ပြသွားခဲ့တဲ့ MCU ရဲ့ Avengers : Endgame ဟာ သမိုင်းသစ်တစ်ခုကို ရေးသွားခဲ့ပြီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ ယောင်းတို့ရေ…
Libra (For Her Myanmar)
ဖွဈသှားလား၊ မဖွဈသှားလားတော့မသိဘူး. ငိုပွီး ပွနျထှကျလာရတယျ.. T.T
ကဲ.. ကဲ… သတငျးကွီးနတေဲ့ Avengers : End Game ကို ကွညျ့ပွီးသှားကွပွီလား? အကျဒျမငျကတော့ ကွညျ့ပွီးပါပွီရှငျ… အဲ့အကွောငျးလေး ယောငျးတို့ကို ပွောခငျြလှနျးလို့ ဒီဆောငျးပါးလေးကို ရေးလိုကျရခွငျးပါ.. ကဲ.. ဒါဆို အရငျဆုံး End Game မကွညျ့ခငျ ဘာတှေ လိုမလဲဆိုတာ အရငျပွောပွမယျနျော.. ကွိုတငျပွငျဆငျ အောငျပှဲဝငျပေါ့ကှယျ..
ပထမဆုံး လိုအပျတာက တဈရှူးထုပျပါ။
ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ငိုတတျတယျ၊ အငိုသနျတဲ့ ယောငျးတှဆေို တဈရှူး တဈလိပျလောကျ ဆောငျသှားပါ 😛 နောကျတာပါ.. တဈထုပျလောကျတော့ အိတျထဲ ထညျ့သှားကွပါရှငျ.. မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ ဒရာမာ အခြိုးအကှတှေ့ကေို တှမွေ့ငျခံစားရမှာပါ။
ပွသခြိနျ ၃နာရီ ကွာပါတယျ။ ၃ နာရီလုံးဟာ လှတျသှားလို့ မဖွဈတဲ့ အခနျးတှခေညျြးပါပဲ.. အစပိုငျးမှာ စကားမြားတယျ ဆိုပမေဲ့လို့ အဲ့စကားတှဟော နောကျပိုငျးလာမယျ့ ဇာတျလမျးတှကေို ရလေညျသှားအောငျ ရှငျးပွနိုငျတဲ့ စကားတှခေညျြးမို့ ဒီအပိုငျးတှလေညျး ကြျောခသြှားလို့မရပါဘူး.. ဒါကွောငျ့ ရှူးအရငျကွိုပေါကျထားပါ။ ဇာတျကားစပွပွီဆိုတာနဲ့ ထိုငျရာမထ၊ မကျြတောငျမခတျတမျးသာ ကွညျ့ပါတော့ ယောငျးရေ…
အရှကေ့ ထှကျခဲ့သမြှ ၁၁ နှဈစာ ရုပျရှငျတှေ အကုနျပွနျကွညျ့ထားပါ။
ပွနျနှေးပါ။ မဟုတျရငျ ဘယျသူက ဘာလဲ၊ ဘယျနားက ပျေါလာလဲဆိုတာ နားလညျလိုကျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဟာ.. အရောငျလေးတှေ စုံလိုကျတာ၊ ခသြှားတာလေးတှေ လှလိုကျတာဆိုပွီး ပွနျလာရပါလိမျ့မယျ။ ဒီဇာတျကားကို နားလညျဖို့ဆိုရငျ သူ့ရှကေ့ Infinity War တဈကားတညျး ကွညျ့ထားရုံနဲ့တငျ မလုံလောကျပါဘူး။ ၂၀၀၈ Iron Man ကနေ စလို့ Infinity War အထိ တောကျလြှောကျ နားလညျထားဖို့၊ ပွနျကွညျ့ထားဖို့ လိုပါတယျ။ (အခြိနျရသေးရငျ Iron Man ရှကေ့ ထှကျထားတဲ့ The Incredible Hulk ပါ ပွနျကွညျ့ထားပါဦး.. မငျးသားတော့ မတူဘူးရယျ 😀 ဒါပမေဲ့ Hulk အကွောငျးကလညျး သိထားဖို့ လိုတယျလေ..) တဈကားမှ လှတျလို့ မရပါဘူးနျော.. တဈကားလှတျသှားတာနဲ့ နားမလညျစရာတှေ ပျေါလာပါလိမျ့မယျ။ ဇာတျကားတိုငျးရဲ့ Credit Scene တှကေိုပါ အကုနျကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျနျော… Post Credit Scenes တှဟော MCU က ဇာတျကားတိုငျးရဲ့ အရေးကွီးတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှပေါပဲ…
Related Article >>> ယောငျးက Infinity War ထဲက ဘယျအမြိုးသမီး ဟီးရိုးဖွဈမလဲ?
ကဲ.. ဒါဆို ကွိုတငျပွငျဆငျရမယျ့ အပိုငျးက လုံလောကျပါပွီ.. ဇာတျလမျးဘကျ တဈခကျြသှားကွညျ့ရအောငျ..
Infinity War တုနျးက Thanos ကွီးရဲ့ လကျဖြောကျထဲ Universe (စကွဝဠာ) က သကျရှိ တဈဝကျတိတိ ဖုနျမှုနျ့ဖွဈသှားတာ သိပွီးသား ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒီနောကျမှာတော့ Thanos ကွီးဟာ သူ့ရဲ့ တာဝနျပွီးမွောကျသှားပွီမို့ ဂွိုဟျတဈခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး တောငျယာစိုကျပွီး ဘဝကို ဖွတျသနျးနပေါတော့တယျ။ (ဒါက Infinity War ရဲ့ Credit Scene မှာလညျး ပါတယျနျော.. ) Avengers တှနေဲ့ Thanos ဘယျလိုတှေ ဆကျပွီး ဖွဈကွဦးမှာလဲဆိုတာ End Game မှာ အဖွပေျေါလာခဲ့ပါပွီ။
Doctor Strange ပွောခဲ့သလို ဒါဟာ အနိုငျရဖို့အတှကျ တဈခုတညျးသော လမျး ဖွဈလာမှာလား?
Thanos ကွီးကရော လှယျလှယျနဲ့ အလြှော့ပေးလိုကျမှာလား?
သသှေားတဲ့သူတှကေရော ပွနျပွီး ရှငျသနျလာမှာလား? စတာတှကေိုတော့ ငှရေောငျ ပိတျကားထကျမှာ ဆကျပွီး စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ ယောငျးတို့ရေ…
Related Article >>> Infinity War ကွညျ့ပွီး ဟာလာဟငျးလငျး ခံစားခကျြကွီး ကနျြခဲ့မယျဆို ယုံလား ယောငျးတို့…
အကျဒျမငျ့ အမွငျကို ပွောရမယျဆိုရငျတော့ MCU Fan တှအေတှကျ ဒီဇာတျကားဟာ အကောငျးတကာ့ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ ဇာတျကားတဈကားပါပဲ။
ဇာတျကားမထှကျခငျက ခနျ့မှနျးထားကွတဲ့ Fan Theory တှေ မှနျတာတှလေညျး ရှိသလို လှဲခြျောတာတှလေညျး တဈပုံကွီးပါ။ Avengers တှေ ကွားက သံယောဇဉျ၊ အရာရာကို ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ သူတဈယောကျအတှကျ ဘဝဟာ အဓိပ်ပာယျကငျးမဲ့သှားပုံတှေ၊ အသကျကိုရငျးပွီး အတူတူ တိုကျပှဲဝငျခဲ့ကွတဲ့ သူတှကွေားက ယုံကွညျမှု၊ ခေါငျးမာမှု၊ သူရဲကောငျးဆနျမှု၊ ကိုယျပိုငျဘဝထဲက ခဈြခွငျးတရား၊ မိသားစု၊ ဘဝရဲ့ တနျဖိုးထားရတဲ့ အရာ စတာတှကေို ရငျနငျ့စရာ တှရေ့မှာ ဖွဈသလို Infinity War ရဲ့ Wakanda Battle ထကျ ပိုပွီး Epic ဖွဈတဲ့ Fight Scene (တိုကျပှဲပွကှကျ)တှကေို တှမွေ့ငျရမှာပါ။ နောကျပွီး ကွညျ့တတျမယျဆိုရငျ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ စှမျးအား ဘယျလောကျကွီးတယျဆိုတာကိုလညျး ပါးပါးလေး ပုတျပွသှားတာကို တှရေ့ဦးမှာပါ။
နောကျပွီး Russo Brothers က Infinity War အပွီးမှာ ပွောခဲ့သလို ” သပွေီးတဲ့ သူတှကေ ပွနျရှငျလာတော့မှာ မဟုတျဘူး.. တကယျကို သသှေားတာ” ဆိုတာကလညျး ဂငျြးမဟုတျပါဘူး။ တကယျကို သသှေားကွတာပါ။ ဆိုပမေဲ့ မမြှျောလငျ့ထားဘဲ ပွနျမွငျတှရေ့မယျ့ အကှကျတှေ ရှိပါတယျ။ MCU ရဲ့ ထုံးစံ ဟာသတှကေလညျး ဇာတျလမျးကို လေးမနအေောငျ ဆှဲဆောငျထားနိုငျတာက အသကျပါ။
MCU နဲ့ စာခြုပျသကျတမျး ကုနျသှားပွီဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျတှကေို အဆုံးသတျပေးလိုကျပုံက Perfect Ending လို့ ဆိုရမှာပါ။ ရယျလညျး ရယျရသလို ငိုလညျး ငိုရတယျဆိုရငျ ယုံလိုကျပါ ယောငျးတို့ရေ… ဇာတျကားပွီးလို့ ရုံထဲက ထှကျလာသူတိုငျးက မကျြခှံလေးတှေ မို့၊ မကျြနှာလေးတှေ ပကျြပွီး ထှကျလာကွတာ မွငျမိတာပဲ အကျဒျမငျတော့ 😀 ကိုယျတိုငျလညျး တဈရှူးတဈထုပျလောကျ ကုနျအောငျ သုံးခဲ့သေးတယျ ဟီးဟီး.. Trailer မှာ ပါခဲ့တဲ့ “Whatever it takes” ဆိုတာက End Gameရဲ့ အသကျပါ.. ယောငျးတို့အသညျးကို ကောငျးကောငျးကွီး ခှဲနိုငျတယျဆိုတာ ယုံ.. :’(
မကနြေပျတာကတော့ Thor ကိုပါပဲ.. မယုံမရှိပါနဲ့.. ယောငျးတို့လညျး God of Thunder (မိုးကွိုးနတျဘုရား) ဆိုတဲ့ Thor ကို End Game မှာ တှလေို့ကျရတဲ့အခြိနျမှာ ဟာခနဲ ဖွဈသှားစဖေို့ အာမခံပါတယျရှနျ :/ Cap ရဲ့ “Avengers… Assemble” ဆိုတဲ့ စကားက ကွကျသီးတှေ ဖွနျးခနဲ ထသှားစသေညျထိ နှလုံးသားကို ကိုငျလှုပျနိုငျတဲ့ စကားလို့ပဲ ဆိုလိုကျပါရစေ။ Avengers Theme Song ကွီး ကွားလိုကျရရငျကို ရငျခုနျသံတှေ မွနျလာတဲ့ထိ မိုကျသောပါနျော..
ပွောခငျြတာတှေ အမြားကွီးရှိသေးပမေဲ့ Spoil သလို ဖွဈသှားမှာစိုးလို့ မပွောတော့ပါဘူးနျော.. ပွမေယျ့သာ ပွောရတာ အကျဒျမငျဆို သှားမကွညျ့ခငျကတညျးက ဇာတျလမျးအစ၊အဆုံး Spoil ခံထားရတာ.. ဒါပမေဲ့ သှားကွညျ့တော့လညျး ထိရှပွီး ပွနျလာရတာပဲ… ဟီးဟီး..
ခွုံပွောရမယျဆိုရငျတော့ MCU Fan မှနျရငျ သှားကွညျ့ပါ။ တနျကို တနျတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားပါပဲလို့… MCU Fan မဟုတျဘူး၊ ဒါပမေဲ့ ကွညျ့လညျး ကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျတော့ အပျေါမှာ အကျဒျမငျပွောခဲ့သလို ထှကျပွီးသမြှ ရုပျရှငျတှေ အကုနျကွညျ့ခဲ့ပါ။ End Game မှာ Credit Scene မပါပါဘူးနျော.. လုံးဝ လုံးဝ မပါတာပါ။ အခြိနျကုနျခံပွီး မစောငျ့ပါနဲ့.. ဇာတျကားပွီးလို့ စာတနျးထိုးတာနဲ့ ထထှကျလာလို့ ရပါပွီလို့..
ဒါဟာ Original Avengers တှရေဲ့ အဆုံးသတျလို့တောငျ ပွောလို့ရတဲ့ ဇာတျကားပါ။ MCU ရဲ့ Phase3မှာ အကျဒျမငျတို့ ခဈြရတဲ့ စူပါဟီးရိုးတှနေဲ့ ခှဲခှာခဲ့ရပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ MCU ရဲ့ စူပါဟီးရိုးတှဆေိုရငျတော့ Original Avengers တှကေ ဖနျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ အမွဲတမျး တညျရှိနမှောတော့ ကြိနျးသပေါပဲ။ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အဆုံးသတျဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ပွသှားခဲ့တဲ့ MCU ရဲ့ Avengers : End Game ဟာ သမိုငျးသဈတဈခုကို ရေးသှားခဲ့ပွီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ ယောငျးတို့ရေ…
Tagged Avengers, End Game, Movie review, trend
အမျှော်ကြီးမျှော်ခဲ့ရတဲ့ The Nun ရုပ်ရှင်က ထင်သလောက် စိတ်ကျေနပ်မှု ရရဲ့လားဆိုတော့…
Posted on September 9, 2018 Author Sugar Cane
လူစိတ်ဝင်စားမှုများနေတဲ့ရုပ်ရှင်အတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေး Review လေးလာပြီနော် …..
ဇာတ်သိမ်းမကောင်းသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် (၁)
Posted on October 15, 2018 Author Moe
သြော်… ယောက်ျားလေးလည်း အသည်းကွဲတဲ့အခါ ငိုတတ်ပါရောလား
ယောင်းတို့နှလုံးသားကို မီးနဲ့တွေ့တဲ့ဖယောင်းခဲလေးတွေလို နူးညံ့သွားစေမယ့် စာအုပ် (၃) အုပ်
Posted on August 25, 2017 Author Khine
ဒီစာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ဖြူစင်တဲ့အချစ်နဲ့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်က အရာရာကို အောင်မြင်စေပါတယ်ဆိုတာ ပြန်ပြီး အယုံအကြည်ရှိသွားစေရမယ်လို့ အက်ဒမင်အာမခံပါတယ်
မိုးသည်းည ရဲ့ ကလဲ့စားဝိဉာဉ်
စစ်မှုထမ်းတာဝန် ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် Ji Chang Wook